❗️စကားပြော ကျွမ်းကျင်ဖို့ သဒ္ဒါ လုံးဝ သင်စရာမလိုဘူးတဲ့လား ❗️
အင်္ဂလိပ် စကား ပြောတတ်ဖို့ / ကျွမ်းကျင်ဖို့ သဒ္ဒါ လုံးဝ သင်စရာမလိုပါဘူး … ( မိခင်ဘာသာစကားလည်း သဒ္ဒါ မသင်ပဲ ပြောတတ်လာတာပဲ ) ဆိုတဲ့ အစွန်းရောက် အမြင်ရှိသူတွေ များလာတာ သတိထားမိလို့ ဒီစာ ရေးဖြစ်တာပါ ။ အဲ့လို လူတွေကို ဒီမေးခွန်းလေး မေးကြည့်ပါ ။ I lived in Yangon for two...
ခဏခဏ လာမေးလေ့ရှိပြီး မေးခံရတိုင်း ရင်မောမိတဲ့ မေးခွန်း
အမေး ။ မေးခွန်းတွေမှာ haveနဲ့ မေးတာကဘယ်လိုမေးခွန်း /Are နဲ့မေးတာက ဘယ်လိုမေးခွန်း/ Do နဲ့မေးတာက ဘယ်လိုမေးခွန်း ဆိုတာပြောပြပေးပါ please အဖြေ ။ အခုလို အရမ်း အခြေခံကျတာလေးတွေတောင်နားမလည်ရင် အခုလို ကြုံရင် ကြုံသလို လျှောက်မေး လျှောက်လေ့လာနေတာမျိုး မလုပ်ပဲ အခြေခံ...
PRESENT TENSE အသုံးပြုသင့်တဲ့ အခြေအနေ ၈ မျိုး
အင်္ဂလိပ် သဒ္ဒါလေ့လာတဲ့ အခါမှာ ကျောင်းသား အများစု တိုင်ပတ်လေ့ရှိတာက ကိုယ် ပြောချင်ရေးချင်တဲ့ စာကြောင်းမှာ ပါနေတဲ့ Verbs တွေကို ဘယ် Tenses တွေနဲ့ သုံးစွဲရမလဲ ဆိုပြီး စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရတဲ့ အခါမျိုးတွေပါ ။ ♦ အင်္ဂလိပ် သဒါ္ဒ အရ Tenses က ၁၂ မျိုးလောက် ခွဲထားတော့ ဘယ် အခြေအနေ...
အင်္ဂလိပ်စာ တကယ် လေ့လာတော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဆိုရင်
အင်္ဂလိပ်စာ တကယ် လေ့လာတော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဆိုရင် ? တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံး အချိန်ဘယ်လောက်ပေးပြီး လေ့လာလေ့ကျင့်မယ် ? အင်္ဂလိပ် ဘာသာစကားနဲ့ ထိတွေ့အောင် ကြိုးစားနေမယ် လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကတိပေးနိုင်လဲ ??? 🙂 ♦️ ကျွန်တော် အနည်းဆုံး လုပ်စေချင်တာကတော့ လေ့လာလေ့ကျင့်ချိန်...